”Horseedfc.net”25 Sano ka dib Muqdisho oo Marti galineyso Tartanka Ciyaaraha Gobolada Dalka – Horseed Sports Club
Tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka Somaliya ayaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo garoonka kubadda Cagta ee Banaadir stadium ee Magaalada Muqdisho.
Ciyaartooyda oo ka kala timid gobollada dalka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho shalay si ay uga qeybgalaan tartanka horyaalka kubada cagta ee goballada dalka, iyadoo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya uu shaciyay in ciyaaraha gobollada dalka ay maanta si rasmi ah uga furmi doonaan garoonka kubbadda cagta ee Banaadir.
Wasiirka ayaa caddeeyay in tartankan kiisa xiga lagu qaban doono garoonka weyn ee Muqdisho stadium oo hadda ah saldhig ku meel gaar ah u ah Ciidamo ka tirsan AMISOM, wuxuuna xusay in ay ku rajo weyn tahay qabashada tartamo intaan ka mug weyn oo ilaa degmooyinka dalkoo dhan ay ka qaybgali doonan.
Duqa Muqdisho ayaa isna sharaxay ahmiyadda maamulka gobolka Banaadir ay ugu fadhiso marti galinta tartan ay ka qaybgalayaan ciyaartooy ka kala socta maamullada dalka ka jira, taasoo muujinaysa xoojinta is- dhexgalka bulshada Soomaaliyeed.
Tartankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo noocisa oo kale ah oo lagu qabto magaalada Muqdisho, waxaana la filayaa in kumanaan ruux ay u daawasho tagaan mudada uu tartankan socdo.